Indlela yokuxhasa indoda kwimeko enzima?
Amadoda encinci kunye nezidalwa ezinobungozi. Baye baveliswa ngokwahlukileyo kunabesifazane. Ukususela ebuntwaneni, bathi ukukhala nokukhononda - akulungile ukuba ufanele ulwe kwaye ungadli. Nangona amadoda afuna inkxaso eninzi njengabasetyhini. Ngaba ukhumbule ukuba kusetyenziswe njani intetho yaseRussia? UVasilisa oxhasayo - ozilumko womthandi wakhe, wathola inkosi-yindoda. Ngoko indlela yokuxhasa umntu kwimeko enzima? Uyakhumbula ukuba wayenothando kunye nentlonipho ngomyeni wakhe?
Umthetho owodwa: ungasabi!
Imeko enzima iyakwazi ukudibana nobomi bendoda yonke. Kubonakala ukuba abantu abaninzi kule meko baziphatha ngokuzinzileyo kwaye banqatshelwe kunabesifazane. Basenokwenzeka ukuba bazibambezele ngaphezu kokukhalaza ngobomi bomhlobo wezoqoqosho esele zixakeke phambili - abantwana - ngomsebenzi. Kwabesetyhini abaninzi, le mpawu yeqabane ibonakala iyindaba yokuqala yokuba indoda okanye umngane unayo ... inkosikazi. Musa nje ukwenza amahlazo angamangalisi kunye neentlobo ezibukhali zeshwele. I-Vasilisa - Iilumko zeenganekwane azizange zihambelane nama-hysterics kunye nezigcawu. Ngokuphambene noko, wayekhathaze intanda yakhe waza wabuza ngasese. Apha ulapha, cinga ngendlela yokuxhasa umntu kwimeko enzima? Musa ukuthukuthela kwaye ungakhathazeki, kodwa endaweni yoko, zama ukunikela ngononophelo ozithandayo kunye nokunakekelwa, ungakufumani into eyenzekayo kuye, kwaye nokuba awukwazi ukumnceda nantoni na.
Ummiselo womibini: yenze i-cosiness
Yonke into efana noVasilisa indoda ehlakaniphile yowokuqala kwindawo yokuhlambela yanyuka yondla isidlo esipheleleyo, yabuza imibuzo. Ngoko uxhasa othandayo xa enenkathazo emsebenzini. Ncedise ukuba azive njengomntu oyintanda nomyeni oyintanda. Lungiselela into enomnandi, umzekelo, i-patties ayithandayo kunye neklabishi. Uxinzelelo olubangelwa yimeko enzima, kuya kunceda ukususa umculo omnandi kunye namakhandlela ekudleni. Amaconsi ambalwa eoli ye-lavender ecocekileyo, eyongezwa kwityuwa lokuhlamba, kunye nokuhlamba okufudumele kuza kukhulula umntu wakho. Intsapho ehamba epakini engekude nekhaya iya kukwazi ukucima imeko, ngendlela, ngokukhululeka ngokupheleleyo! Nasi lakho iqabane kwaye uphazamiseka kwiingcinga ezibuhlungu. Isisombululo esitsha esinokusombulula zonke iingxaki ngoku siya kuvela ngokuqinisekileyo! Ukunika ithemba lokuzithemba ngamakhono abo, ukumbetha ngekhati lakhe elithandayo ngaphambi komsebenzi okanye uncede ukuthayipha ikhompyutheni ingxelo ebalulekileyo kuye. Emva koko, uqhubeka ufumana ngokukhawuleza kunoko?
Umgaqo wesithathu: sibheke izixazululo ezingaqhelekanga
Ngaba imeko enzima idibene nomhlobo? Unokuxhasa njani indoda kwimeko? Into ephambili kukuba uqaphele kwiingxelo. Zama ukulimaza umyeni wakho, kwaye ngexesha elifanayo musa ukukhusela umhlobo wakhe. Xa indoda yakho ibanda, mnike ithuba lokubambisana nomhlobo wakhe - umzekelo, uye kwibha yezemidlalo kunye neentsapho. Umdlalo obalulekileyo uza kubambanisa abalandeli kwaye bancede ukususa uxhaso oluvela phakathi kwabo. Khumbula, kubalulekile ukuba uqaphele kwaye ungayithandi. Umgudu ogqithiseleyo wokuxolelana nabahlobo abangxabano kungabangela umona ngomntu wakho.
Nangona kunjalo, kwisimo ngasinye esinzima kukho iresiphi yokuziphatha exhomekeke kwimeko ngokwalo, iimpawu zomyeni wakho okanye umhlobo. Kodwa kukho izinto ezimele zigcinwe kuyo nayiphi na imeko enzima. Okokuqala, hlalani. Oku kuya kunceda ukuba ungabhubhisi, kwaye kuya kuba lula kumhlobo wakho, indoda okanye umthandi ukuhlalisa. Okwesibini, funda ukunika umntu wakho ingqalelo. Oku kuya kunceda ngexesha lokuba uqaphele imeko enzima, ukuxhasa umhlobo wakho, kumncede. Khumbula - ii-serials, iiforam kunye nentombi, ukuba kunjalo, unokulinda.
Injani indoda yesini?
Indlela yokugcina umhlaza womntu
Indlela yokugcina umntu-iTaurus
Kiss and character of a man
Ukuqaphela kwindoda yesicwangco samanje
Yintoni intombazana enokuyithobela xa ibona umfana
Ukuba umntu uphukisa umfazi, ngubani omele abe ngowokuqala ukunyamezela?
Ukutyhepha umntwana ngeziyobisi, utywala kunye nocuba
Umtshato ebusika: ungesabi
Iingcebiso kubazali: into engasetyenziselwa ukukhulisa umntwana
Iingcebiso ezifanelekileyo zokucoceka kunye nempilo
Ukukhawulwa kwe-nasum nasum
I-TOP-10 iingubo eziphambili zeMigangatho yeNyaka entsha yeNyanga 2017
Moussaka kunye ne-turkey
Indlebe ephuma kwi-carp
Izitya ezihle kunye nokutya okunyanisiweyo kunyaka omtsha
Iimveliso ezixhamlayo zemifuno i-adaptogens
Ungamhlophe njani amazinyo akho?
Indlela yokubuza umntu ukuba enze isipho